Xizi ikheshi bezinto Turkey Eurasia ikheshi embukisweni
Mashi 23, 2017 - 26, zingu-15-Turkish ikheshi Eurasia embukisweni owaqhutshelwa e Istanbul, Turkey, le exhibiti ...
Mashi 23, 2017 - 26, zingu-15-Turkish ikheshi Eurasia embukisweni owaqhutshelwa e Istanbul, Turkey, embukisweni ihlanganisa global ikheshi umkhakha uchungechunge wonke amabhizinisi owaziwa. Njengoba ehamba phambili abakhiqizi ezifuywayo ikheshi umkhakha sika esizihambelayo umkhiqizo, abahlinzeki kanye nabahlinzeki, Xizi ikheshi abamenyiwe umbukiso.
Lo mbukiso, eWest Elevator kuya ivulekile idokodo evulekile nhlangothi zombili ukuze zibonise ngokugcwele izinzuzo West ikheshi ibhizinisi, amandla obuchwepheshe nokumaketha ezingeni, nge uchungechunge ezihlakaniphile imikhiqizo emisha ukuheha amazwe amasha ezivela emhlabeni wonke ukuza okusha amakhasimende ubudala ukuba uthintane Izingxoxo, baye esesho ukuthi wethemba ukuthi ne zommbila West ngokujulile ukubambisana kanye nokuthuthukiswa ezivamile. Lo mbukiso, eWest Elevator eminye kuya umkhakha emhlabeni ikheshi ukukhombisa amandla eqinile brand futhi omuhle kakhulu amandla obuchwepheshe. Esikhathini esizayo, eWest uzolwela ukuhlola ikheshi, futhi ngenkuthalo uzenza 'ephuma' ukuhlela amasu, esibonisa ipulani izwe brand.
Njengoba uhulumeni esiqokiwe Turkish inkonzo ikheshi, entshonalanga ikheshi kuleli zwe kodwa futhi washiya imisebenzi eminingi yamandla, omunye zakudala Alacity iphrojekthi, kubalulekile idolobha Alasehir e-Turkey, eduze lzmir, lokhu emabhilidini ezinhlanu izitolo kanye 22 Phansi indlu kuyinto Alasehir izimpawu zendawo yesimanje ezihlakaniphile. Xizi enikeziwe umgibeli ngamakheshi, umlilo ngamakheshi, escalators kanye zokuhamba ezihlangabezana EN81 ejwayelekile futhi CE isitifiketi yakamuva. Ukuze Xizi, lena akuyona kuphela isidingo ukuthuthukiswa, kodwa futhi umsebenzi ukugqugquzela "enziwa e China" emhlabeni.
Win e co-ukudala - 2017 Xizi ikheshi ukumaketha ukwabelana party
Ngo Febhuwari 24, entshonalanga ikheshi "ukudala umqondo. Win at 2017 entshonalanga ikheshi ukumaketha share party "ngesikhathi w ...
Ngo Febhuwari 24, entshonalanga ikheshi "ukudala umqondo. Win at 2017 entshonalanga ikheshi ukumaketha share party "ehhotela entshonalanga iphelile, Mr West inyunyana uMongameli Chen Xiaxin, ms izipho uMongameli omusha theo, Mr West ikheshi uMongameli wen-chao liu, entshonalanga ikheshi ukumaketha ms esiphezulu lily Tse ne ukuphathwa inkampani futhi omuhle abavela kulo lonke elase wabenza ezweni kanye yokuthengisa elite babuthana, akubona lokhu umcimbi ndawonye.
Party "Hangzhou ukwamukela kwakho" ingoma iqale, wabe esengena isixhumanisi seqembu ukhiye - West ikheshi uqambe emcimbini. Iqembu ahlonishwe ukuvakashela iKomiti kaMasipala Lin'an IKomidi, uNkosazana Shen Hui neNtshonalanga Phakamisa abalingani zibone lo mzuzu zomlando, amanzi aphuma wonke amagumbi wonke inisele "West" lokhu ithwala umoya kazwelonke Chinese yokukhiqiza umkhakha izingcweti brand. Ikheshi West namashumi amathathu ukuthuthukiswa, ukunqwabelana, zifana neconsi tshe ukuba bafake, emifuleni nokucwila kolwandle, kancane wayenemfuyo waphonsa brilliant namuhla. Zanamuhla Xizi lift, abahlukaniswe umfece phandle, yokuqhuma zinkulu, kuyoba ngenkazimulo uhambo entsha!
Kulandelwe nguMengameli Liu Wenchao futhi ukuthengisa ongumqondisi Xie Liping ingqikithi senkondlo - "ukuchitha aseNtshonalanga": izimbali eNtshonalanga, sibhebhezela-amathathu iminyaka eyisithupha, sihamba sobabili ngaphambi, njalo mina njalo ukubhala Ngaphansi senkondlo, ukuze umoya ukucula imicabango ofuna ukuphumela obala ... ... umsindo landelo nkondlo bese irekhodi umsebenzi wenkampani kanzima nomjuluko kwezithombe ubudala, izinkumbulo wonke umuntu emuva esikhathini esidlule. IBHAYIBHELI ELINGCWELE IBHAYIBHELI I
Liu futhi Xie Imininingwane izinkondlo aphindaphinde futhi ake co-umongameli we West, uMnu Chen Xiaoxin banomuzwa wathi West namuhla, ipumelelo ikheshi akuyona ngephutha, kodwa wonke amagumbi wonke zonke umlingani ezivelele kanye West zommbila ukusebenza ndawonye, side by side Ukushikashikeka ukuza. Sine ubhontshisi, futhi ufisa eWest Elevator embukisweni grand, ezithembisa! Lonke kusihlwa wagcwala mellow iwayini, wonke umuntu yokuphuzwayo kumnandi.
Ifomu iqembu ocebile futhi inemibalabala, baqale uhlelo oluhle engapheli. Iqembu wabuye walungisa iphathi engazi lokuzalwa usuku lokuzalwa abalingani eziyisikhombisa, uMnu Liu Wenchao, uMongameli kanye noNksz Xie Liping, uMongameli Marketing, mathupha wathumela izifiso engcono kakhulu yokusebenzisa izikhathi romantic ubude bokuphila.
Ngobusuku emangalisayo ezihambayo nenjabulo yaphela, West Elevator isidlo ezibukwayo wavula okwandulela kubuye ngokubambisana. Uma kungekho kwendawo ukuphi ezulazulayo - abalingani abathandekayo, siyakwamukela ukhambe uye ekhaya!
Ngaphakathi dalo of the West sub-ikheshi ukumaketha share uzolandela emangalisayo, ngakho hlala ubukele!